Madaxweyne Farmaajo “Dr. Xaawo Cabdi waxa ay baal dahab ah kaga jirtaa sooyaalka dalkeenna” – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo “Dr. Xaawo Cabdi waxa ay baal dahab ah kaga jirtaa sooyaalka dalkeenna”
Dhinaca kale Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid marxuum Drs Xaawa Cabdi Dhiblaawe oo maanta ku geeryootay magaalada Mogadishu.
Mudane Mursal ayaa sheegay in marxuumada ay kaalin weyn kasoo qaadatay adeega Caafimaadka, isla markaanna muddadii dalka uu bur-bursanaa ay kusoo shaqeysay duruufo adag.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay in marxuum Drs Xaawa Cabdi ay kaalin kasoo qaadatay adeegga Caafimaadka ee dalka
Xaliima Yarey “Hadda waan dhammeystiranahay, sagaalkii xubnood ee Guddiga Doorashooyinka wey buuxaan”
Xaliima Yarey “Hadda waan dhammeystiranahay, sagaalkii xubnood ee Guddiga Doorashooyinka wey buuxaan"